Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Luxembourg
Tahiry isam-bolana Avrily 2012 1 Lahatsoratra Marsa 2012 2 Lahatsoratra
Avrily 2010 1 Lahatsoratra Tantara mikasika ny Luxembourg 14 Avrily 2012
Mali: Tombouctou, Tandindonin-Doza Ny Haren-Kolontsaina Mpanoratra Abdoulaye Bah · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Mampahatsiahy zavatra malaza sy toetr'andriana izany anarana Tombouctou izany ho an'izao tontolo izao. Nefa mahatandindonin-doza an'i Tombouctou ny ady any avaratr'i Mali sy ny fisian'ireo henja-pihetsika vitsy dia vitsy an'isa ao. Maro ireo mampaneno lakolosy fanairana.
15 Marsa 2012
Makedonia: Mitohy Misondrotra Ny Vidin-tsolika Mpanoratra Filip Stojanovski · Amerika Avaratra Ny fisondrotana tsy mitsahatry ny vidin-tsolika no anton'ny olana maro ho an'ireo vahoaka ao Makedonia, ary ny sasany tsy misalasala miresaka ilay fihenjanana anaty hanihany
Fiombonambe Eraopeana : “Alea (non) ACTA est” ? , na tsy mbola vita ve ny fanapahana? Mpanoratra Suzanne Lehn · Eoropa Afovoany & Atsinanana Ny fanetsehana ny mpiondana aterineto hanohitra ny ACTA, ny fifanekena ara-barotra manohitra ny fakan-tàhaka dia samy tsy mihalefy raha toa kosa ny PArlemanta Eraopeana tsy maintsy niatrika ny fndinihana ireo tolo-dalànanandritra ny fivoriany tao Strasbourg tamin'ny herinandro lasa. Ny fanamafisana dia nahemotra eo am-piandrasana izay ho fanambaràna avy amin'ny Fitsarana... 16 Avrily 2010
Qatar: Manohitra ny politika vaovao mikasika ny fahazoan-dàlana raisina eo am-pahatongavana ireo mpiasa mpifindra monina Mpanoratra Shabina Khatri · Amerika Avaratra Manankery manomboka ny 1 May, Qatar dia miomana hanafoana ny fahazoan-dàlana alaina eo am-pahatongavana ho ana firenena ampolony maro mampiasa io fomba io. Sorena ireo mpiasa mpifindra monina mieritreritra ny amin'ny fianakavian'izy ireo ary milaza sahady fa mety hanimba ny reska fizahantany ao amin'ity firenena kely ao amin'i Gulf ity... Mpiserasera Facebook?